Horudhac: Liverpool Vs Real Madrid Ee Finalka Champions League-ga Wararka Labada Koox Iyo Shaxda Macquulka
HomeWararka CiyaarahaHorudhac: Liverpool Vs Real Madrid ee Finalka Champions League-ga Wararka Labada Koox iyo Shaxda Macquulka
May 28, 2022 Wararka Ciyaaraha, Champions League, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain 0
Afartan iyo kow sano ka dib dagaalkoodii ugu horeeyay ayaa ka dhacaya magaalada quruxda badan ee Paris, Liverpool iyo Real Madrid oo isku arkaya finalka Champions league-ga.
Inter Milan, Benfica iyo Villarreal ayaa ah kooxaha uu kasoo gudbay Jurgen Klopp si uu u soo gaaro garoonka Stade de France, halka wiilasha Carlo Ancelotti ay kasoo gudbeen Chelsea, Paris Saint-Germain iyo Manchester City.
Thiago Alcantara ayaa dhaawac soo gaaray qaybtii hore ee ciyaarta kulankii Wolves ka dib markii uu dhaawac ka soo gaadhay Achilles.
Klopp ayaa markii hore ka niyad jabay fursada uu ku soo bandhigi karo finalka, laakiin hada rajo kooban ayaa jirta.
Dhanka kale, dhaawaca muruqa Fabinho ayaa la filayaa inuu dib u soo laabto ka dib markii uu ku soo laabtay tababarka kooxdiisa Arbacadii, halka Joe Gomez uu sidoo kale qayb ka yahay kooxda ka dib markii uu si dhakhso ah uga soo kabsaday dhaawac canqowga ah.
Virgil van Dijk iyo Mohamed Salah ayaa labadooduba taam u ahaa todobaadkii hore ka dib markii ay finalka FA Cupka soo gaadheen dhaawacyo waxayna filayaan in ay ku soo laabtaan XI-ga 1-aad ee halkan, iyada oo midkii danbena uu Reds ku darsaday kabta dahabka ah ee Son Heung . -min _
Diogo Jota ayaa la hubaa inuu dariiq u furi doono Salah, halka Ibrahima Konate uu inta badan qaladka lahaa goolkii furitaanka ee Wolves ee isbuucaan, lakiin ciyaaryahanka oo joogto ka ah Champions League ayaa doonaya inuu booskiisa xajisto.
Divock Origi ayaa ciyaaray kulankiisii ​​ugu dambeeyay ee kooxda ka dib markii uu dhibaato muruqa ah ka soo gaaray tababarka, taasoo la macno ah in aysan jiri doonin wax sagootin ah xiddiga reer Belguim ka hor inta uuna si xor ah ugu biirin Ac Milan.
Taas bedelkeeda, tababaraha Real Ancelotti ayaa rajeynaya inuu helo qof walba oo taam ah oo diyaar u ah kooxdiisa finalka 17aad ee European Cup/Champions League, iyadoo David Alaba uu ku soo laabtay tababarka bartamihii isbuuca ka dib dhaawac soo gaaray.
Alaba ayaa ka maqnaa kooxdii wajaheysa Betis, lakiin waa inuu booskiisa saxda ah ka soo muuqday X.
Halyeeyga Champions League ee Marcelo ayaa sidoo kale iska diiday taam ahaanshihiisa si uu isu diyaariyo, laakiin wuxuu mar kale ciyaari doonaa booska labaad ee Ferland Mendy, halka Eder Militao uu rajeynayo inuu booskiisa sii haysto.
Tartanka: Champions League-ga
Garoonka: Stade de France
Saacada: 22:00 Pm Waqtiga Somalia
Garsoore: Clement Turpin (France)